Ingane enenkani ayifuni ukulala
Impi yesikhathi sokulala enganeni iyinto evamile ekhaya, isikakhulukazi uma ingane yakho inenkani lokho okwenza ukhameke kakhulu futhi uma ungazimisele ukuba nenkani yokubekezela nawe ungagcina wehluliwe.
Lithini ibhayibheli ngokuzixolela wena
Into enhle nekhululanayo ngokuba nguMKhrestu ngukuthi uKhrestu wafela ukuxolelwa kwezono zethu. Kodwa waphinde uJesu wafundisa amakholwa ukuxolelana njengokuba naye esixolele. Inkonzo yokuletha ukuthethelela kwabanye abantu, kungakhathalekile inzima kanjani, kodwa okungangabazwa ngayo la okholweni kwaKhrestu. Uma sekuziwa ekuzixoleleni ngamaphutha esiwenzile, ngolunye-ke udaba lolo. Mhlawumbe izono esezadlula ziyakwengama futhi awunasiqinisekiso ukuthi uzodlula yini kwizolo lakho lamaphutha.
Imingcele enganeni egula ngengqondo esikhulile
Ukuphazimiseka ngengqondo sekuyinsakavukela esikhathini esikusona. Ukukhulisa ingane ephazamiseke ngengqondo akulula futhi kubiza amava amaningi ukukwenza ngokuhle.
Impi yokugqoka ngokuhlonipheka kunye nezingubo kubazali nentsha
Uma kungukuthi undodakazi wakho oyi-teenager ukuqhumisa ikhanda ngezamafeshini, nakanjani umelwe ukuhlala nathi ohlelweni Ezomndeni ngoba sizokhuluma ngendaba yempi yokugqoka ngokuhlonipheka nezingubo kubazali nama-teenager.
Ukukhuthaza umoya wokuncokola enganeni yakho
Abantu abaningi bayathanda ukuqhuma ngokuhleka izikhathi ngezikhathi, abanye ukuhleka baze bakubize ngekhambi lomphefumulo, bese khona lapho bakhona abanye abancokola nabahleka nje ngalesosikhathi, okunokwenzeka mhlawumbe i-personality yabo leyo esuke ivela.
Ukubhekana nokulwa kwabandawonye
Uma kunengane engaphezu kweyodwa ekhaya, nakanjani ungangibuza ungiphale ulimi, kuzoba khona uhlobo oluthile lokulwa. Umbuzo usekuthini okungakanani ukulwa ezinganeni ekhaya okumelwe umzali akuvumele futhi abhekene nakho?
Ukukhula ngokobukhrestu kunye nendlela yokukhula
Uma uzizwe untengezela mayelana nesimo sohambo lwakho lobuKhrestu awuwedwa, maningi amaKhrestu angqubuzana nalesosimo semizwa nsukuzonke. Uma kungukuthi kunokwenzeka, unentshisekelo ngokwethembeka ukubona ukukhula okubanzi, nakanjani uzokhuthazeka ngalokhu esizokusho khona la
Ubudlelwano obuguqukayo kwi-teen
Ngesikhathi ingane yakho ingena eminyakeni yobu-teenager, kunokwenzeka sewuqaphelile kunoguquko olukhona ngesondele kubona. Lakhona owake waba yindawo ephephile neyisifuba sengane yakho, usungakubona ukuthi sewugudluziwe, kwasekuba ngabangani bengane yakho asebethathe indawo empilweni yayo.
Ukunakekela izingane sikhathi sinye nabadala ungalindele
Kuvamisa ukuba nezigaba zempilo ekukhuleni kwethu, siphakathi nezingcindezi zezidingo zobuzali, sizithole ukuthi nabazali bethu sebesekukhuleni okudinga unakekelo lwethu. Yisimo leso okungelula neze ukubhekana naso, Kodwa khona simile.
Ukuya emcimbini womndeni wabashadile ababulili-bunye
Njengabazali abangaMakhrestu sifuna ukuhlala siqinisekisa ukuthi izingane zethu ziyazazi izinsika zokuphila uKhrestu asifundise ukuphila ngazo. Nokho sidinga futhi ukuzenza ziqonde umhlaba lo owele esonweni, esiphila kuwona.
Ukungena emshadweni usesikhungweni semfundo ephakeme
Imishado ezweni lakithi iyehla ngamazinga asheshayo, bangu 30% kuphela abasesigabeni sokushada abashadile. Ngakho uma sizwa abasha bethi balungisela ukungena emshadweni kuyasijabulisa lokho kakhulu, nokho ,ngakube kungubuhlakani yini ukushada ngesikhathi usese university?
Ukunamathela ngenhliziyo komunye oseceleni kanye nokuholela kwi-sahlukaniso
Ziningi izinhla eziholela ekwakheni ukuthembana emshadweni, futhi okuthi uma abashadene bezibambe kahle, nakanjani kuzoba nokuqina kokukhula kobudlelwane. Uma ngencaphephe kube ngukuthi uwakwakho usenamathele komunye ngenhliziyo, kulapho kanye ozozwa kwehla ngokushesha izinga lokwethembana phakathi kwenu.
27 May Parenting Your Tween and Teen with Respect (Part 1 of 2)
24 May Growing a Deeper Faith Day by Day
9 Jun Finding Hope Again - (Part 2 of 2)
2 Jun Finding Ways to Parent Courageously (Part 2 of 2)
3 Jun Child is afraid of being alone
4 Jun Child is overly cautious
1 Jun Respecting your teenager
31 May Teens wants to help mom understand changes in their relationship